प्रलेस कर्णाली प्रदेशको सम्मेलन नौ असारमा - Dainik Nepal
प्रलेस कर्णाली प्रदेशको सम्मेलन नौ असारमा
दैनिक नेपाल २०७५ जेठ १० गते ११:२८
काठमाडौँ, १० जेठ । वाम लेखकहरुको साझा संगठन प्रगतिशील लेखक संघ कर्णाली प्रदेशको पहिलो अधिवेशन आउँदो असार ९ गते सुर्खेतमा हुने भएको छ ।
संघको दशौँ केन्द्रीय सम्मेलनले परिमार्जन गरेको विधान अनुसार प्रदेश सम्मेलन हुन लागेको हो । दशौँ सम्मेलनले विधानलाई परिमार्जन गरि संघीयता अनुसार प्रदेश कमिटी बनाउने व्यवस्था गरेको थियो ।
यसअघि १ नम्बर प्रदेशको सम्मेलन भइसकेको छ भने ७ नम्बर प्रदेशमा डा. पुष्करराज भट्टको संयोजकत्वमा सम्मेलनल आयोजक समिति गठन गरिएको छ । तर, सम्मेलनको मिति तय भइसकेको छैन ।
कर्णाली प्रदेशको सम्मेलनका लागि भने तयारीलाई तीब्र पारिएको छ । प्रदेश उपाध्यक्ष रामप्रसाद पुरीको संयोजकत्वमा रहेको सम्मेलन आयोजक समितिमा केन्द्रीय सदस्य मणिकुमार पोखरेल, हरिलाल महतारा, जगत वाशिष्ठ, पूर्ण बहादुर शाही, सिद्धबहादुर खड्का, युद्धविक्रम शाही, सनतकुमार शाही, पुष्पराज आचार्य र पूर्णसमीर महतारा सदस्य रहेका छन् । यसैगरी, आमन्त्रितमा डा. दीपक गौतम र केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजबहादुर कुँवर रहेका छन् ।
सम्मेलन तयारीका लागि विभिन्न उपसमितिहरु पनि गठन गरिएको छ । सुर्खेत अध्यक्ष हरिलाल महतारा संयोजक रहेको आर्थिक उपसमितिमा डा. दीपक गौतम, युद्धविक्रम शाही, सनत कुमार शाही, कृष्णबहादुर खड्का छन् । यसैगरी जगत वाशिष्टको संयोजकत्वमा पुष्पराज आचार्य र पूर्णसमीर महतारा सदस्य रहेको प्रचार प्रसार उपसमिति बनाएको छ । सांगठनिक प्रतिवेदन लेखनका लागि जगत वाशिष्ट र युद्धविक्रम शाहीलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।
कर्णाली प्रदेशका सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, कालिकोट, रुकुम (पश्चिम) र सल्यान जिल्लामा संगठन क्रियाशील छ भने अन्य जिल्लामा निष्क्रिय अवस्थामा छ । सुर्खेत शाखाले विगत सत्र वर्षदेखि प्रगतिशील लेख रचना समेटिएको रातो थुङ्गा नामक मुखपत्र समेत प्रकाशन गरिरहेको छ ।
२००९ साल असोज ५ गते श्यामप्रसाद शर्माको अध्यक्षतामा गठन भएको संघको अहिले केन्द्रमा मातृका पोखरेलले नेतृत्व गरिरहेका छन् । संघका देशभर ४० जिल्लामा शाखा छन् ।